Kambôja : nanokatra ny fitsarana manokana ny Khmer Rouge i Duch · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2009 19:36 GMT
I Kaing Guek Eav, fantatra amin'ny anarana hoe Duch no nitsangana nanoloana ny fitsarana manokana izay tohanan'ny Firenena Mikambana hitsarana ireo mpamono sy mpandripaka olona tao amin'ny Khmer Rouge ao Phnom Penh. Izy no nitantana ny fonjan'ny Tuol Sleng Prison tao Phnom Penh, izay nahafatesana olona manodidina ny 12 000 araka ny voalazan'ny Guardian.
KI-Media naka ny famelabelarana tao amin'ny vaovaon'ny BBC mikasika ny tantaran'i Duch.
CAAI News Media no nanoratra fa 16 000 ny isan'ny olona maty tao Tuol Sleng.
Sarotra amin'i Kounila Keo ny mampifamatotra ny famonoan'olona sy ny tantaran'ny fireneny.